Ngwa kachasị mma iji kpọọ oku vidiyo otu | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-anọgide na-ebu nkwanye na ngwa nke na-eme ka anyị nwekwuo ike ịnagide ụbọchị ndị a nke ụlọ mkpọrọ mmanye. N'ihi mgbanwe nke teknụzụ na netwọk mmekọrịta, site n’ụlọ nke ọ bụla anyị nwere ike ịkpọ oku vidiyo ma kpọtụrụ nke anyị. WhatsApp na ngwa izipu ozi ndị ọzọ emeela ka ọ dịrị ya mfe ịgbaso ihe na-eme na ezinụlọ na ndị enyi.
Mana ime ka kọntaktị ahụ dịkwuo adị, site na oku vidiyo anyi nwere ike ihu ma nu ibe anyi. Ihe na-eme ka anyị hụkwuo nso. Kemgbe ọnọdụ mberede na iche iche na-amalite n'ụlọ, enwere ọtụtụ nzukọ anyị na ndị enyi na ezinụlọ anyị kwụsịrị. Ya mere, otu oku vidiyo bụ nnukwu ihe ngwọta iji jide, hu iru ibe unu ma nwee ọ .ụ.
1 Otu vidiyo oku na-apụ
Otu vidiyo oku na-apụ
Taa ka anyị wetara gị free ngwa nke mere na ị na-emekọ ihe ndị ahụ ị na-atụ uche. Anyị emeela obere nhọrọ nke ndị anyị hụrụ kachasị amasị anyị, n'ihi ohere ha na-enye ma ọ bụ ịdị mfe nke njikwa ha. Ugbu a ị gaghị enwe ihe ngọpụ maka nke ahụ, site n'ụlọ, ị nwere ike iwepụta oge iji soro ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi nọrọ.
Na mgbakwunye inwe oge dị mma, ngwa maka oku vidiyo otu, ha nwekwara ike inwe ọrụ ọkachamara. Nzukọ na otu ndị ọrụ, iji nwee ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ igwe, dịka ọmụmaatụ. Uzo ozo nke eji eme ihe ndi a site na mgbochi amalite, bu ịga n'ihu na-aga (site n'ụlọ) klas egwuregwu egwuregwu anyị.
Anyị ga-amalite ndepụta nke aro a ngwa onye obula na-eji. Dị ka anyị si mara, WhatsApp agbanweela oge, na ruo oge ụfọdụ ọ na-enye anyị nhọrọ nke ịkpọ oku vidiyo. Ngwa nke anyi ji mara nke oma site na ojiji anyi na-eme kwa ubochi, ya na, ma oburu na i maghi, i nwekwara ike ikpo oku.
Ọ bụ eziokwu na Otu oku site na WhatsApp amachibidoro ya ọnụ na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere na-arụ ọrụ n'otu oge. Naanị anyị nwere ike iji oku a na-akpọkarị nwere ihe ruru ndị ọrụ atọ ọzọ n'out oge. Yabụ ọ bụrụ na ọ bụ oku nwere mmadụ atọ ma ọ bụ anọ, ojiji ya dị mma, anyị ga-amata ụzọ anyị ga-esi mee ya ma anyị agaghị etinye ngwa ọ bụla ọzọ.
Ọ bụ ngwa nke Google. N'ezie, ọtụtụ tụkwasịrị ya obi arụnyere na ekwentị ha n'amaghị ama n'ime Ngwa nke ngwugwu Google arụnyere. Tụtara ya dịka ngwa izipu ozi snapshot nke jiri ụjọ chọọ ịdị ka WhatsApp mana o doro anya na ọ dara. Ọ bụ ezie na ọ nweghị mgbe ọ nwetara ihe ịga nke ọma a tụrụ anya ya, Google anọgidewo na-edebe ya n'etiti ngwa ya.
Oge a anyị anaghị ekwu maka Hangouts dị ka ngwa izipu ozi, doro anya. Otu n'ime atụmatụ kachasị mma o nwere, ma na-aga n'ihu na-eme ya, bụ ịkpọ oku vidiyo. Jiri ngwa a na Iji akaụntụ Google anyị, anyị nwere ike ịkekọrịta oku vidiyo ruo mmadụ iri n’out oge. Inwe ike ịgbasa ruo 25 mmadụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ọkachamara ọrụ na akaụntụ.
Nkwado ọzọ na i nwere ike iji na-enweghị iji wụnye ọ bụla ngwa. Na nke You gaghị edebanye aha ma ọ bụ mepụta akaụntụ na weebụsaịtị ọ bụla ọhụrụ. Akaụntụ Google gị bụ njirimara gị na site na desktọọpụ weebụ n'onwe ya ị nwere ike ịmalite ikwu okwu ozugbo. Ọzọkwa, N'ihi akụrụngwa nke sava ndị o nwere, ọ na-enye anyị nnukwu ụda na ogo onyonyo na njikọ.
Ugbu a, anyị na-eji ngwa nke Apple aga. An App na nke a bụ tinye ya na ngwaọrụ Apple niile. Ya mere, ọ bụrụ na anyị ejiri iPhone, iPad ma ọ bụ MacBook anyị agaghị enwe itinye ngwa ọ bụla mgbakwunye, ma ọ bụ budata usoro ọ bụla. Ọzọkwa, dịka ọ dị na Google na Hangouts, anyị nwere ike iji FaceTime na Apple ID anyị na-enweghị ike ịmepụta akaụntụ.
Na nke a, dị ka ọ dị n'ọtụtụ ngwa Apple, You nwere ike iji ya naanị na ngwaọrụ iOS. Ihe na-egbochi oke ojiji ya dabere na ụdị ngwaọrụ na / ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ anyị nwere. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ha niile nwere ngwaahịa apụl, ihe ruru mmadụ iri atọ na abụọ nwere ike iso na-akparịta ụka n'out oge.
Nzukọ ZOOM Cloud
Developer: Nkwukọrịta vidiyo Zoom, Inc.
N'ebe a anyị hụrụ ngwa ị na-azụ ukwuu ma mara ezigbo mma na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Kedu nke gbawara agbawa n'ime izu ụka a n'ụlọ mkpọrọ. Ngwa n'efu na nke a nwere mbipute akwụ ụgwọ nke na-agbasawanye ohere ya. Site na nsụgharị efu anyị nwere ike ịkpọ oku vidiyo na ihe ruru ndị nsonye 100, naanị na dabere na ikpe anyị ga-enwe mmachi oge.
Na ụdị a kwụrụ ụgwọ enweghị mmachi gbasara oge eji ya, ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị sonyere na-adị otu. Iji ya ọ dị mkpa, na mgbakwunye na nbudata na ịwụnye ngwa ahụ, mepụta akaụntụ iji nwee ike ịmata onwe anyị na ngwaọrụ ọ bụla. Anyị chọtara ihe ọhụụ banyere ngwa ndị ọzọ, nke ahụ bụ ya anyị nwere ike isonye na ọnọdụ olu site na oku ekwentị.
Ngwaọrụ nkwukọrịta ọzọ maka oku vidiyo. N'okwu a, A mụrụ GoToMeeting site na mmemme kọmputa nke mechara mee ka ọ banye na ụlọ ahịa ngwa. A mụrụ n'akụkụ nke ọzọ na ngwa ndị ọzọ anyị na-agwa gị, nke izizi emebere maka ngwaọrụ mkpanaka ma ugbu a na tebụl anyị. GoToMezị, kemgbe mmalite ya, bụ lekwasịrị anya nke ọma na ndị ọkachamara na nzukọ azụmahịa, ọ bụ ezie na dị ka niile ha nwere ike ji mee ihe maka ụdị ọ bụla nke video oku.
Ọ nwere a "free" mbipute na ụfọdụ na-agaghị emeli, na ọnụọgụ ndị ọrụ nwere ike ịbụ akụkụ nke mkparịta ụka ọ bụla ga-adabere na akaụntụ sitere n'aka onye nhazi nzukọ ahụ. Na a mfe interface Banyere ojiji ya, ọ dị mma karịa iji na kọmputa ma ọ bụ mbadamba nkume karịa na smartphone. Isonyere GoToMeeting na desktọọpụ ị ga-mkpa ike a onye ọrụ profaịlụ. Ọ bụ ezie na Site na ngwa mkpanaka, na-agbakwunye ID nke nzukọ a kpọrọ gị, ị ga-enwe ike iji ya na-enweghị ndebanye aha gara aga
Nzukọ GoToMe - Mkparịta ụka vidiyo & Nzukọ Ọgbakọ
Lelee egwuregwu kacha mma kachasị mma maka kwarantaini
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Ngwa kachasị mma maka oku vidiyo otu
Samsung ga-akwụsị imepụta ihe ngosi LCD n'afọ a